Nagarik News - शुक्रबार सम्पादकीय : विप्लव बखेडा
एकीकृत नेकपा माओवादीबाट २०६९ असार ८ गते टुक्रिएर गठन भएको नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेसँगै माओवादी विभाजनको नयाँ शृंखला थपिएको छ।
अध्यक्ष किरणलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने नेता भन्दै बाहिरिएको विप्लव समूहले पार्टी गठन तथा कार्यदिशाका बारेमा स्पष्ट नपारे पनि उनीहरूले कात्तिक २६ र २७ गते कपिलवस्तुको शिवगढी जंगलमा 'केन्द्रीय विशेष अन्तर्क्रिया' गरी 'आवश्यक परे फौजी रणनीति पनि बनाउने' निर्णय गरेका थिए। यही निर्णयलाई आधार मान्दा पनि विप्लव फेरि अर्को सशस्त्र विद्रोहका लागि तयारी गर्दैछन् भन्ने बुझिन्छ। शिवगढी जंगलको भेलापछि उनले सञ्चारमाध्यममा दिएको प्रतिक्रियामा प्रत्येक व्यक्तिको दिमाग नै हतियार भएकाले क्रान्तिका लागि हतियार ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए। सम्बन्ध विच्छेदका लागि विप्लवले अध्यक्ष किरणसमक्ष पेश गरेको पत्रमा'किरणको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने र वर्गसंघर्षको नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित किरणको नेतृत्वसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको जानकारी गराउँछौँ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउने र पार्टीलाई सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता बनाउने भन्ने विषयमा बहस चल्दै आएको र त्यसमा पार्टीभित्र गम्भीर मतान्तर देखापरेको चन्दको भनाइ छ।
नेकपा–माओवादीको विभाजनसँगै एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र विद्वान नेता डा. बाबुराम भट्टराईले खोल्न चाहेको नयाँ शक्तिको चर्चा पनि चल्न थालेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना राजनीतिक गुरु किरणसँग एकता गर्न चाहेको छिपेको छैन। तर, त्यसका लागि वैद्यतिर विप्लव र एकीकृत नेकपा माओवादीतिर डा. भट्टराई अनिच्छुक देखिँदै आएका थिए। माओवादीबाट विप्लव बाहिरिएसँगै दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र वैद्यको दूरी कम हुने राजनीतिक अनुमान कति सत्य नजिक छ भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ। तर, माओवादीको यो विभाजनमा अन्य पक्षले खुशी मनाउने हतारो भने कदापि गर्नु हुन्न। सम्बन्ध विच्छेद गरेका चन्दसँग केन्द्रीय तहका एकमात्र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा छन् भनेर उनलाई नजरअन्दाज गरियो भने फेरि अर्को भूल हुनेछ। त्यसैले विप्लवलाई विद्रोहमा जानबाट रोक्नका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेका दल सबैले उत्तिकै चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विप्लवले गर्न चाहेको विद्रोहको वातावरण बनाउन उनलाई त्यति सहज छैन। तर, संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका दलहरूले गर्ने गल्तीका कारण भने उनका लागि उर्वर परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ।
दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दै फेरि अर्को विद्रोहको कुरा उठ्नु निश्चय पनि दुःखद कुरा हो। जनताले द्वन्द्वको पीडा यति छिट्टै भुलिसके र फेरि अर्को युद्धका लागि तयार हुन्छन् भनेर सोच्नु जनताप्रतिको अपमान हो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत जनताले आफ्नो बलबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएको हेर्न पाएका छैनन्। राजनीतिक रूपमा अग्रगामी छलाङ मारे पनि दलका नेताहरूले प्राप्त उपलब्धिको घनत्व अनुमान गर्न नसक्दा जनताले अहिले पनि दुःख पाइरहेका छन्। निरंकुश राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने ताकत भएका जनता नेताहरूकै कारण निरीह बन्न बाध्य छन्। त्यसैले जनतालाई फेरि अर्को विद्रोह वा विग्रहको डर देखाएर तर्साउनेभन्दा प्राप्त उपलब्धिलाई छिटोभन्दा छिटो संस्थागत गरेर अघि बढ्ने दिशातिर राजनीतिक नेतृत्व लाग्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको यति लामो समयसम्म पनि टुंगोमा नपुग्नु, पहिलो संविधानसभा विफल हुनु, दोस्रो संविधानसभामा पनि दलहरूको बीचमा किचलो मात्र परिरहनुजस्ता कारणहरूले जनतामा बढेको वितृष्णालाई आफ्नो विद्रोहको आधारभूमि बनाउने विप्लव योजनालाई विफल बनाउन छिटोभन्दा छिटो सहमतिमा संविधान जारी गदै जनतालाई समृद्धिको बाटोमा लानका लागि प्रयत्न थाल्नुपर्छ। अब जति लामो समय यो संक्रमण कायम रहन्छ, त्यति नै परिस्थिति धमिलो हुँदै जानेछ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता विषयमा विपक्षमा रहेका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको सलबलाहट मौलाइरहेको अवस्थामा फेरि विद्रोह सुरु भयो भने सबैभन्दा बढी फाइदा परिवर्तनविरोधीले नै उठाउनेछन्। त्यसैले विप्लवले अर्को प्रचण्ड बन्ने लालसा राख्नुअघि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न जरुरी छ। अहिले पनि देशको केन्द्रमा रहेका 'एलिट'हरू आफ्नो शक्ति जनताको तल्लो तहसम्म पुगोस् भन्ने चाहिरहेका छैनन्। त्यसैले १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धिको स्वाद जनतालाई चाख्न नदिई अर्को विद्रोहको कुरा गर्नु बखेडाबाहेक केही होइन। हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धताबिना जनताको मुहारमा मुस्कान छर्न सकिँदैन। जहिले पनि विद्रोह र क्रान्तिका मात्रै कुरा गरेर कतै पुगिँदैन भन्ने विप्लवहरूले बुझ्न जरुरी छ। सशस्त्र क्रान्तिबाट स्थापित भएको तथा जनताको मतबाट अनुमोदित भएको ठूलो राजनीतिक दल माओवादी छिन्नभिन्न हुँदा जनताका परिवर्तनका कार्यसूची ओझेलमा परेको तथ्य विप्लवले भुल्नु हुँदैन। उनले गर्ने भनेको विद्रोह उनका लागि त आत्मघाती हुन्छ नै, यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि 'सेबोटेज' गर्ने निश्चित छ।
'ईश्वरको यस्तै इच्छा रैछ, मेरो इच्छा पूरा हुन पाएन। किनभने अब ता मैले यै बिग्रेका कुराको सुधार गर्ने काममा तन, मन, धन र जनसमेत लगाउनुपर्ने आवश्यक पर्न आएका हुनाले म...
एउटा किशोर महिलाका ब्रा र पेन्टी चोरेर यौनतृप्ति लिन्छ। अर्को युवा महिलाले लुगा फेरेको हेरेर चरमोत्कर्षमा पुग्छ। अनि, अर्को व्यक्ति दिनमा एउटा नीलो फिल्म हेरेन भने बौलाहा जस्तो हुन्छ। समाजमा सेक्स विचलन बढ्दो...
सबैभन्दा सस्तो ४ जी स्मार्टफोन
स्मार्टफोन कम्पनी लेनेभोले सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोन प्रदर्शन गरेको छ। अमेरिकाको एक प्रदर्शनीमा कम्पनीले ए ६००० मोडलको स्मार्टफोन प्रदर्शन गरेको हो। जुन अहिलेसम्मकै सस्तो स्मार्टफोन हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ।